Tsiroanomandidy Lehilahy 2 nampiahiahy tratra nitondra basy sy ody gasy
Anosy Ny minisitra mihitsy no nisambotra ilay mpanendaka
Avy niasa handeha hamonjy fodiana ny Minisitry ny filaminam-bahoaka, Fanomezantsoa Randrianarison,
Rongony (jamala) 620kg nodorana, 1608 fototra nopotehina
Raha ny artemisia no nisy nanentana sy nampirisika mba hambolena tao anatin’ireny fotoana nampamaivay ny coronavirus ireny, dia ny rongony na jamala no hita fa nirongatra.
Fanafihana tao Tsarahonenana Sahanivotry Tratran’ny zandary sy fokonolona ireo jiolahy
Raha tsiahivina ny raharaha dia naharay antso ny zandary mpanao fisafoana tarihin'ny Zandary kilasy voalohany Razafimahatratra Tojoniaina,
Varotra rongony Lehilahy iray voasambotra tany Mahajanga
Lehilahy iray 24 taona no tratra tao Mahajanga ny sabotsy teo noho ny fitondrana harona feno rongony.
Famakiana ny hotely lehibe tetsy Tsaralalana Vehivavy mpiasa no niray tsikombakomba tamin’ireo jiolahy
Nisy namaky ny biraon’ny tompona hotely lehibe iray etsy Tsaralalàna ny alin' ny 27 septambra lasa teo. Entana mitentina 10 tapitrisa Ar no very tamin'izany ka ny 28 oktobra no tonga nametraka fitoriana ireo tompon’andraikitra tao an-toerana.
Herisetra sy halatra Lehilahy 3 no tratra teny Ankadikely
Toy ny kaominina maro any amin’iny distrikan’Avaradrano iny dia miaina tsy fandriampahalemana matetika ihany koa ny ao amin’ny kaominina Ankadikely. Tsy
Soalandy Ankadivoribe Tsy hita popoka izy mianaka
Renim-pianakaviana iray antsoina hoe : Rasoazanamanana Ionja Niaina vao 24 taona monja, niaraka tamin’ny zanany kely vao 18 volana no tsy hita ary mbola tsy niverina tao an-tokantranony hatramin’ny omaly nahazoana ny vaovao.
Lehilahy miisa 02 no voasambotry ny polisim-pirenena avy ao amin’ny Distrikan’i Tsiroanomandidy afak’omaly alahady 13 septambra nandritra ny « Barrage de sécurité »
izay nataony tao Ambohitsoa, kaominina ambonivohitr’i Tsiroanomandidy. Tokony ho tamin’ny 05 ora sasany hariva no nosakanana ny lehilahy 24 taona sy 36 taona rehefa nampiahiahy ny Polisy ny fihetsiny. Tamin’ny fisavàna azy ary dia basy vita gasy iray sy ody gasy maro no tratra teny amin’izy roalahy ireto. Nandritra ny fanadihadiana natao azy ireo dia nilaza ho mpimasy sy mpamboly ny asan’izy roalahy. Mbola mitohy kosa ny famotorana mahakasika ilay basy sy ny saika hampiasana azy. Vokatry ny fisavana nataon’ny Polisy hatrany moa dia olona miisa 96 no nosavaina. Kamiao lehibe miisa 19 ihany koa no nojerena ny antontan-taratsiny sy ny tao anatiny raha miisa 08 ireo fiara kely.Miisa 22 kosa ny taxi brousse raha 13 isa ny moto nosavaina. Ny 02 tamin’ireto farany no voasazy fa tsy nanao aro loha. Nahatratra 10 kosa ireo posiposy nomena fampitandremana raha 79 ireo olona nosavaina karapanondro.